I-Valley-View Holiday Home e-Montelparo ene-Pool & Garden
U-Isabelle - BELVILLA unokuphawula okungu-1765 kwezinye izindawo.
Leli khaya lamaholide elongayo e-Montelparo lilungele umndeni noma abangani. Ingakwazi ukuhlalisa izivakashi ezingu-5 futhi inamagumbi okulala angu-2. Inechibi lokubhukuda okwabelwana ngalo ukuze uvuseleleke futhi uphumule.
Ihlathi lisendaweni eyi-100 m ukusuka ekhaya uma ufuna ukuhlola imvelo eluhlaza. Izitolo zegrosa eziseduze nendawo yedolobha kuqhele ngamakhilomitha amabili ukusuka ekhaya. Ukuze uthole usuku oluhle, ulwandle luqhele ngamakhilomitha angama-30.
Ukushisa okuphakathi kufakwe ukuze uhlale unethezekile. Ungakwazi ukujabulela ingilazi yewayini nabathandekayo bakho engadini enefenisha. Izingane zingazithanda izinto zokudlala. Ungakwazi ukuqasha amabhayisikili ukuze ugibele edolobheni elincane. Umdlalo wethenisi yetafula noma inkundla ye-boules ungajatshulelwa nabangane bakho bomshado ngezikhathi zokungcebeleka. Umbhede ungaqashwa futhi isilwane esifuywayo sivunyelwe ngemali encane. Kunechweba lokushaja izimoto zikagesi.
Isikhumulo sezindiza esiseduze singamakhilomitha ayi-100 ukusuka ekhaya.
Izivakashi zingangenwa phakathi kuka-4-8 PM futhi ziphume ngo-8-10 AM.
Isakhiwo: Isitezi esingaphansi: (Igumbi lokuhlala(umbhede osofa ababili, i-TV), Ikhishi elikhulu(itafula lokudlela, ihhavini, isiqandisi), Igumbi lokulala elinegumbi lokugezela(umbhede okabili, ishawa, indishi yokuwashela, indlu yangasese, i-bidet), Igumbi lokulala elinegumbi lokugezela(eyodwa umbhede, umbhede ophindwe kabili noma imibhede engu-2 yabantu abangabodwa, ishawa, indishi yokuwasha, indlu yangasese, i-bidet), umbhede wezingane)
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-1,765 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye